बैंकिङ खबर । प्राइम कमर्सियल बैंकमा रोजगारीका लागि कर्मचारीको माग गरिएको छ । बैंकले अफिसर, ब्रान्च म्यानेजरका लागि केही, रिलेशनसिप म्यानेजरमा केही, गोल्ड लोन सुपरभाइजरमा केही, डिजिटल बैकिङ अफिसर र ट्रेनी असिस्टेन्ट पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकले साउन २८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकमा रोजगारी
बैंकिङ खबर । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले म्यानेजमेन्ट ट्रेनीका लागि केही संख्यामा र ट्रेनी असिस्टेन्टका लागि समेत केही संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको हो । बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिरका विभिन्न शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले भदौ २ गते बुधबारसम्म बैंकिङ समयभित्र आवेदन
प्रभु बैंकले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी (विज्ञापनसहित)
बैंकिङ खबर । प्रभु बैंक लिमिटेडमा विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरिएको छ । बैंकले अफिसर, जुनियर अफिसर, सुपरभाइजर, असिस्टेन्ट, म्यानेजमेन्ट ट्रेनि र ट्रेलर पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो । इच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेदवारले अगस्ट ९ सम्म बैंकिङ समय भित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, प्रभु बैंकको अफिसियल वेभसाइटबाट समेत एप्लाई गर्न सकिने
प्राइम बैंकमा खुल्यो रोजगारी, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
बैंकिङ खबर/प्राइम कमर्सियल बैंकमा विभिन्न तहका लागि रोजगारी खुलेको छ । बैंकले अफिसर, शाखा प्रबन्धक, रिलेशन म्यानेजर/अफिसर, गोल्ड लोन सुपरभाइजर/असिस्टेन्ट, डिजिटल बैंकिङ र ट्रेनी असिस्टेन्टको माग गरेको हो । बैंकले उक्त विभिन्न तहको लागि कम्तिमा ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको बैंकिङ अनुभव हुनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै ट्रेनी असिस्टेन्टको लागि भने स्नातक तह पास हुनुपर्ने उल्लेख
राष्ट्र बैंकले सिपाहीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म माग्यो कर्मचारी(पाठ्यक्रमसहित)
बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६३ जना कर्मचारीको लागि जागिर खुलेको छ । विभिन्न सेवामा ६ महिना करार अवधि कायम हुने गरी दरखास्त माग गरेको हो । ८ कक्षा पासदेखि एसएलसी वा सोसरह शैक्षिक योग्यता भएकाले पनि उक्त जागिरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन अनलाइनमार्फत् दिनुपर्ने छ । सुरक्षा सहायक १ जना र रक्षक ५
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रोजगारीकाे अवसर
बैंकिङ खबर/सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रोजगारी खुलेको छ । कम्पनीले ब्रान्च इन्चार्चका लागि केही संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको जनाएको छ । जुनसुकै विषयमा मास्र्टर डिग्री गरेको तथा मार्केटिङ क्षेत्रमा काम गर्ने प्यासन भएको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नो विभिन्न शाखा तथा उप शाखा कार्यालयका लागि कर्मचारीको माग गरेको हो ।
महुली लघुवित्तमा रोजगारी खुल्यो, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
बैंकिङ खबर/महुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । लघुवित्तले एक सूचना निकाल्दै स्थायी र करार नियुक्तिका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । कम्पनीले विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सहित सहायक प्रबन्धक, बरिष्ठ अधिकृत, अधिकृत, सहायक अधिकृत, बरिष्ठ सहायक र कनिष्ठ सहायक प्रशिक्षार्थी पदमा लागि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । उक्त पदहरुमा
लुम्बिनी विकास बैंकमा खुल्यो जागिर, अनलाइनबाटै आवेदन
बैंकिङ खबर/लुम्बिनी विकास बैंकले विभिन्न तहका लागि कर्मचारी मागेको छ । बैंकले विभिन्न तहका लागि कम्तीमा १ वर्षदेखि ३ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिहरूको माग गरेको हो । बैंकले प्रदेश २ मा रहेको कार्यालयका लागि १ जना प्रदेश प्रवन्धकको माग गरेको छ भने पब्लिक रिलेशन म्यानेजर पदमा २ जनाको माग गरेको छ । सो पदका लागि
बैंक/वित्तहरुमा रोजगारीको लर्को : छानीछानी अनलाइनबाटै आवेदन
बैंकिङ खबर/ अहिले विभिन्न बैंक, वित्तहरुले रोजगारी खुलाएका छन् । नयाँ देखि पुराना व्यक्तिका लागि बैंकले कर्मचारी माग गरेका हुन् । कर्मचारी माग गरिएका बैंक, वित्तका वेभसाइटमा गएर आवेदन फारम अनलाइनबाटै भर्न सकिन्छ । नबिल बैंक नबिल बैंकले कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले हेड लिगलमा म्यानेजर एम २,म्यानजेर एम ३ र म्यानेजर लिगलमा कर्मचारीको
इन्फिनिटी लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी
बैंकिङ खबर/ इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । लघुवित्तले नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत १ जना, कनिष्ठ अधिकृत, व्यवश्थापन प्रशिक्षार्थी र वरिष्ठ सहायक पदमा केही कर्मचारी माग गरेको हो। इच्छुक तथा योग्यता पुगेका उम्मेद्धवारले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र आवेदन दिईसक्नु पर्नेछ ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले माग्यो सातै प्रदेशका लागि कर्मचारी
बैंकिङ खबर/आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सातै प्रदेशमा विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । कम्पनीले सूचना निकाल्दै सातै प्रदेशका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरको हो । कम्पनीले प्रदेश प्रमुख पदमा ३ जना (गण्डकी, लुम्बिनी, सुदुरपश्चिम), ऐशिसटेन्ट म्यानेजर, सिनियर मार्केटिङ अफिसर, डेभलपमेन्ट अफिसर तथा अफिसर तहका पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । उक्त पदहरुमा योग्यता
मुक्तिनाथ विकास बैंकमा ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर
बैंकिङ खबर/मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले असिस्टेन्टदेखि सुपरभाइरसम्मका विभिन्न पदमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। बैंकले ब्रान्च मेनेजर, रिलेसन मेनेजर, अपरेसन इन्चार्ज, ट्रेड फाइनान्स इन्चार्ज, ट्रेड फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, लोन रिकभरी, डिपोजिट मार्केटिङ र फिल्ड स्टाफमा असिस्टेन्टदेखि सुपरभाइरसम्म ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो। बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ब्रान्च मेनेजरअन्तर्गत केही सुपरभाइजर, जुनियर अफिसर, अफिसर
समृद्धि फाइनान्समा खुल्यो रोजगारी
बैंकिङ खबर/समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले कर्मचारी मागेको छ । कम्पनीले बजार प्रतिनिधिका लागि केही संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको हो । कम्पनीले पोखरा, चितवन, हेटौंडा र बुटवलको लागि केहि बजार प्रतिनिधि माग गरेको जनाएको छ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले असार २७ गतेसम्म कम्पनीकोे ठेगानामा बैंकिङ समयभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।
एनएमबि बैंकले माग्यो ३१० जना कर्मचारी
बैंकिङ खबर/ एनएमबि बैंकले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको छ । बैंकले ब्रान्च म्यानेजर (अफिसर र सिनियर अफिसर)का लागि ५० जना, रिलेशनसिप म्यानेजर (जुनियर अफिस र अफिसर)का लागि ४० जना, असिस्टेन्ट रिलेशनसिप म्यानेजर९सिनियर असिस्टेन्ट र सुपरभाइजर) का लागि २० जना, अपरेशन इन्चार्च (सिनियर असिस्टेन्ट र सुपरभाइजर)का लागि २० जना, जुनियर असिस्टेन्टका लागि १५० जना र
महालक्ष्मी लाईफ इन्सोरेन्सले सातै प्रदेशमा माग्यो कर्मचारी
बैंकिङ खबर/महालक्ष्मी लाइफ इन्सोरेन्सले सातै प्रदेशमा कर्मचारी मागेको छ । इन्सोरेन्सले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी मागेको हो । हेर्नुहोस्